Amabutho kweNyakatho Korea neNingizimu Korea: A Ukuqhathanisa. Ukwakheka, usayizi, ukwakhiwa kwezikhali DPRK ibutho
Namuhla, North Korea ngokuvamile kuqhathaniswa Mordor enkulu esabekayo. Njengoba wokugcina Korea cishe akukho, eyaziwa kodwa wonke umuntu uyazi ukuthi kunzima futhi scary ukuphila khona. Phakathi naleso sikhathi, North Korea, nakuba wawungaphansi zabantu Republic of Korea, kude kakhulu leli nani okufanayo India, Pakistan, futhi kwamanye amazwe aseMpumalanga Yurophu. Ngaphezu kwalokho, amabutho North Korea, ziphakathi kwezinye zezinto enamandla kakhulu, ngisho noma kungukuthi behlome izikhali zanamuhla kakhulu.
Ayikho usizo futhi asinakuba nethemba?
Kanye wonke umnotho isimo avaliwe futhi amabutho akhe ahlomile amasha zisekelwe kakhulu isimiso azizona iziphukuphuku. On Russian kokuthi lihunyushwe ngokuthi "nokuzethemba." Yiqiniso, izwe ngesikhathi wathola usizo lwebutho kusukela Union neChina. Nazi nje manje "Lafayette" iphelile: Pyongyang nje kungekho mali ukuze ikhokhele izindleko eRussia ubuchwepheshe obusha, futhi China akuyona ukwesabe "Juche", nakuba ngokusemthethweni sibasekela. Nokho, kukhona kwelinye izwe lokho kuyasiza ngempela leli DPRK. Sikhuluma Iran. Umsolwa, ikakhulukazi, ukuthi kwakuvela Iranian amabutho DPRK wathola, sivunyelwa ukuba siqhubeke zenuzi izikhali nobuchwepheshe.
Ngakho-ke, ungalokothi uweye baseKorea. Izwe has a eziyinkimbinkimbi ezinamandla zezimboni ezingasetshenziswa ukukhiqiza kabusha cishe zonke izinhlobo zezikhali ucishe eyinkimbinkimbi. BaseKorea ayikwazi Abagcini izindiza nezindiza ezinophephela emhlane kodwa kulula ukubhekana nazo screwdriver inhlangano kuncike ukutholakala izingxenye amazwe. Njengoba North Korea - ezweni avaliwe kakhulu, ulwazi olungenaphutha ngemithi etholakala azikho amabutho kanye nemishini, lonke ulwazi icishe ilingane, esekelwe izilinganiso abahlaziyi '.
Kodwa ungalokothi uweye umsebenzi wabo futhi umsebenzi intelligence: eminyakeni yamuva siye safunda okuningi izimfihlo oqhubeka ibutho North-Korean. Troop Juche, ngasendleleni, abantu abangaba yizigidi ezingu-1.2! Ezweni lethu ibutho imayelana usayizi ofanayo, kodwa uma siqhathanisa usayizi isimo ... Kukholakala ukuthi northerners cishe oyedwa kwabane omdala ezintathu, abesilisa nabesifazane. Kodwa! Usayizi we amabutho DPRK kakhulu kunabayeni ukuthi index eNingizimu. inzuzo North Korea ngo-iqiniso lokuthi cishe kuso sonke isibalo sabantu abadala yezwe futhi bangakwazi ukuziphatha ngendlela ngandlela-thile ihlobene nebutho lezempi, kodwa isimo e-Republic of Kazakhstan nge nowokudatshukelwa le okuningi. Ngakho ukuthi amabutho esitha amayelana alinganayo.
Okwamanje, uNgqongqoshe-Armed Forces of the DPRK - Hyon Yong-Chol. By the way, akunjalo kudala emaphephandabeni nakuthelevishini Kazakhstan futhi izwe abezindaba kokuqagela ngenkuthalo ukuthi wadutshulwa ... kuphela "izisulu ezingenacala" uNgqongqoshe ngokushesha ngemva kwalokho ziyobonakala futhi kwabonisa ukuthi ilungelo lokuba amahlebezi ngokufa kwakhe ezazithe nehaba.
Kuyaziwa ukuthi northerners kukhona ezicitshwayo eziningi zenuzi ngobubanzi ehloniphekile. Kukhona ulwazi okwakufanele izigaba zezizwe ezintathu, "Rodong-1." missile ngamunye ingakwazi ukuthwala warhead yenuzi kuya ibanga hhayi ngaphansi kuka 1.3 ayizinkulungwane amakhilomitha. Kukhona "Nzalo" izikhali, esungulwe ngesisekelo P-17, imodeli Soviet. Phakathi kwabo - rocket "Hvasong-5" (uhla amakhilomitha hhayi ngaphansi kuka-300). imodeli kangcono kancane "Hvasong-6" (uhla - kuze kube amakhilomitha angu-500). Hhayi owayinaka baseKorea kanye missile "Tochka-U", wadala ku isisekelo yayo KN-02. Kukhona kwi DPRK kwakudala behlomile real ngesimo umfuziselo "Luna-M".
kanye nokwaziswa wathola eminyakeni yamuva ezweni ngawo ugcwaliseka ngokugcwele ukuthuthukisa InterContinental missile "Taepodong" imodeli. Cishe bonke ochwepheshe abavumayo ukuthi amabutho DPRK abanalo Ochwepheshe uyakwazi ukudala sezikhali zenuzi ngabo. Ukwazi nje ukuthi nangomcibisholo sezikhali tinemigomo elawula kakhulu nokwethenjelwa ukumelana sindisa, nobuchwepheshe okunjalo akukhona ngisho ku Iran efanayo.
Ababili abaphuma ukuzivikela
Ngokushesha, siphawula ukuthi umgogodla ukuzivikela-Korean e ukujula kukhona Special Forces, futhi lezo zimali ukuthi kwamanye amazwe musa ngisho ngiphuphe. Kuyaziwa ukuthi amabutho akhethekile imisebenzi northerners kuhlanganise abantu ayizinkulungwane 90, ngakho bangase kahle abe phambili kule inkomba, ngisho e-United States. Kukhona kokubili ezweni futhi ombutho zasolwandle. Yiqiniso, nezinye amaviyo northerners ngokwethukela. Lokho kungenxa yokuthi ngokuvamile wahlela amabutho leli DPRK, okwakhiwa kwalo kuzoxoxwa kabanzi ngezansi.
I Echelon lokuqala indawo yabo komngcele eNingizimu Korea ilungu elihamba kanye wezikhali amayunithi. Endabeni impi yokuqala luyofika North Korea, amabutho leli DPRK kuyodingeka uqale ukuba aphule limise umngcele izinqaba. Uma impi izothatha, esitimeleni efanayo kungaba isithiyo evimbela Ukungena ku ingaphakathi amabutho esitha. Esikhathini uqimba lokuqala, kuhlanganise nabane elihamba nokukodwa wezikhali amabutho. Esikhathini amayunithi elihamba zihlanganisa tank futhi emoyeni regiments, kanye ukwehlukana wezikhali self ezinezinjini.
Esikhathini uqimba yesibili kukhona ethangini enamandla kakhulu nezinye amayunithi embonini yezezimoto. umsebenzi wakhe ngesikhathi yethula Korea ka impi yokuqala - ukuthuthukisa ukuphumelela nokubhubhisa kulawo maqembu isitha, abayoba simelane. Uma northerners ukuhlasela southerners, amayunithi armored kuyodingeka ukuqeda eziphukile ngokusebenzisa amabutho esitha, abazokwazi ukuba adabule Echelon kuqala. Isakhiwo zalamaqembu.I ayihlanganisi kuphela ethangini regiments self ezinezinjini, kodwa ukwehlukana MLRS.
I yesithathu neyesine izitimela
Kulokhu, ibutho North Korea idinga hhayi kuphela ukuze azivikele Pyongyang, kodwa futhi base ukuqeqeshwa. Siqukethe ezinhlanu elihamba nokukodwa wezikhali amabutho. Kukhona armored, ngomshini elihamba regiments, amahhovisi amaningana futhi MLRS missile. Isihlanganisi wesine itholakala komngcele eChina naseRussia. Lezi zihlanganisa ukwehlukana emathangini avuzayo, Gunners, Gunners, artillerymen, elihamba ukukhanya. Njengomhlaba lwesithathu, uqimba sesine ukuqeqeshwa eyisipele.
Kukholakala ukuthi ibutho North Korea sika ayinakho esingaphansi nanhlanu namakhulu MBT tanks ukukhanya mayelana anamakhulu mahlanu. Le backbone kuyinto ecishe ibe yizinkulungwane ezintathu T-55 futhi ukufaniswa kwabo IsiShayina (yohlobo 59). Futhi, kukhona abangaba yinkulungwane T-62. Babekhonza njengababhali ngesisekelo ngokudala siqu imodeli yakho Korean "Jongmyo." Kungenzeka, le mishini wezempi, kukhona okuncane kakhulu ngaphandle amayunithi ayizinkulungwane.
Akubalulekile ukuba bakholelwe ukuthi arsenal Korean kuwufanele kuphela "kwakudala". Kukhona uhlobo ucishe yesimanje ye MBT, ngokuthi "Pokpun-ho." Lokhu ithangi futhi is owehla evela ixhegu T-62, kodwa ngesikhathi yayo ekudalweni wasebenzisa ubuchwepheshe ezihleli kakhulu okuthuthukile T-72 ne-T-80.
I izingalo asizayo KPVT emelelwa ifakwe enamandla 125 mm inganono. Ayesebuyela emuva kusuka isihloko, isibonelo, ukuthi northerners isibhamu ngokuvamile onobuhlobo udumo esingakhulumekiyo. Ukuze uvikeleke zokuvimbela ngokumelene isitha izimoto armored ingasetshenziswa PU ATRA "Bals-3 '(okungukuthi abengeke njengoba wethu" Cornet') kanye MPADS "Jong-Hwa Ebuthongweni '(Analogue ngokuphelele" Needle-1 "). Kunzima ukusho ukuthi ngeke aziphathe impi, kodwa abe ngaphezu eliphi elinye ithangi emhlabeni izikhali ezinjalo alikho isimiso. Kucatshangwa ukuthi ibutho North-Korean has "Songun-915" amathangi akukho kuka 200-300.
Enkonzweni yezwe, zikhona ukukhanya Soviet PT-76, futhi cishe ezingaba ngu-500 eyikhulu namashumi we PT-85 "Shinhen" (wadala ngesisekelo eSoviet ithangi ukuphila kokubili emanzini nasezweni, ifakwe 85-mm izibhamu). Indlela abantu abaningi baseKorea BMP-1 ayaziwa, kodwa ngokuqinisekile eningi. Hhayi kancane futhi APCs. Kusolwa ukuthi iNyakatho Korea has okungenani eziyinkulungwane ngokuphelele Antique BTR-40 futhi BTR-152. Kodwa namanje zikhona esiyingqayizivele Soviet BTR-80A (kokubili izimoto Soviet kanye nentuthuko siqu) ngu-150.
Lihlome North-Korean ibutho has izibhamu ezingekho ngaphansi kweziyi-ayizinkulungwane ezinhlanu self ezinezinjini, acishe abe yizinkulungwane ezine izibhamu towed, ezigqulweni, imiklamo ezahlukene mayelana namakhulu ayisishiyagalombili, mayelana efanayo - MLRS izinhlelo. Lokhu nokuziqhenya northerners - M-1973/83 "Juche-ku" (170 mm). Lezi iziqu enza kube lula ukufika endaweni eseningizimu ezijulile langemuva.
Ngakho, izinga imishini yempi DPRK nezikhali okuyinto izincwadi esizifundayo, kuyinto ezingeni kahle eliphezulu. Konke kuhamba kahle, kodwa sonke lesi imishini (esikhathini esiningi) kakhulu yisikhathi. Kodwa musa wakhwinyisa ngokwedelela. Ngenani North-Korean wezikhali endaweni yesibili emhlabeni, yesibili nodumo PLA. Ngisho noma e-Republic of Kazakhstan nge Esizwa amabutho US bese ukuhambisa isinyathelo, lezi izibhamu bayakwazi ukudala front line manje ulwandle umlilo. Akusizi ngisho US Air Force. Vimbela konke lokhu kungenziwa kuphela iqondiswe isiteleka zenuzi, futhi ubani singenakwenzeka kuthanda.
Aviation "in amaphiko"
Amabutho North Korea, okuyinto ithole isithombe esihlokweni ngokuphindaphindiwe, anemisila kahle ngokwezinga elithile, kodwa zezindiza northerners enkingeni. Sekukonke, North izikhali is hhayi ningi than 700 izindiza. Zonke ekuhlaseleni and attack izindiza sebegugile impela, yobudala efanayo ecishe ibe ikhulu. Njengoba fighters esetshenziswa ngokuphelele wawushiywe yisikhathi MIG-21 ... ngisho MIG-17. Kuyacaca ukuthi akekho kuleli kilasi izindiza yesimanje abakwazi ukuncintisana ngokwenyama. Kodwa-ke kunobufakazi ukuthi iNyakatho Korea enezinto eziningi MIG-29. Nokho, akukho lwazi okuyiyona inombolo bese uyama bezindiza khona.
Ezokuthutha amabutho ahlomile North Korea akudingeki nhlobo. Okuxakayo nje kukhona ethile IL-76, Tu-154 futhi izindiza ezifanayo, kodwa zonke zenzelwe kuphela ezokuthutha ephezulu ezingeni izikhulu zikahulumeni, kanye eziphuthumayo yokuhumusha of ezinye izimpahla sifaneleka ikakhulu. Kuyaziwa ukuthi kukhona northerners mayelana 300 An-2 ( "ummbila"), kanye ethile amakhophi Chinese eyaziwa. Lezi izindiza zenzelwe ukudluliswa esithekileyo SWAT amaqembu. Ngaphezu kwalokho, isiKorea akhawunti Air Force okuthile emhlabeni 350 multi-purpose kanye ukuhlaselwa ngezindiza ezinophephela emhlane. Phakathi kwabo kukhona hhayi kuphela Mi-24 Soviet, kodwa futhi onobuhle American ezimbalwa for yokufuna eyayintula ukusebenzisa uchungechunge abaxhumanisi.
Ngakho, lokho uvala esibhakabhakeni DPRK ibutho? Ukwakhiwa kwezikhali ukuzivikela kungokwalabo BBC (ngisho eliwumhlaba okuyingxenye). Ngo isakhiwo kukhona ngempela onobuhle Antique, kuhlanganise S-75, S-125. Lamadolobha esimanjemanje kakhulu kuyinto eziyinkimbinkimbi S-200. Nokho, enkonzweni izindleko njengoba KN-06, okuyinto ukushintshashintsha endawo Russian S-300. Kukhona MANPADS okungenani eyizinkulungwane eziyisithupha (ikakhulu "Needle"), futhi kufika izinhlobo 11,000 ezahlukene anti-aircraft izibhamu kanye nesibhamu ukukhweza.
Ngokungafani Army, ubuchwepheshe ephelelwe yisikhathi lapho ucishe Ungasingatha imisebenzi ayinikiwe, konke kubi emoyeni. Cishe zonke imishini sebegugile impela, basuke ngokuphelele hhayi ezovumelana nezimo zanamuhla zempi. Nalapha futhi, ngisho nezici eziningana cishe akukho indima, ngoba izindiza ngisho amadala baseKorea awulona ngokwanele. Noma kunjalo, konke kabusha izindiza off nje oyisiphukuphuku: inani elikhulu ezintabeni, sezwe eziyinkimbinkimbi nezinye izinto ukuvumela, uma kunesidingo nge ukusebenza kahle eliphezulu ngisho ukusebenzisa lolu "zoo" kwakudala lobuchwepheshe.
Ngakho ibutho North Korea ogama izinombolo engenhla, uma kwenzeka ngokugcwele ubutha ngokuqinisekile asemrarweni nabaphikisi.
amabutho limise abaqeqeshwe amaMelika sihlome izikhali zabo. Kukholakala ukuthi ROK Army incane kakhulu kuka kuka umakhelwane walo yizilwi enyakatho, kodwa akunjalo: yebo, inombolo njalo viva ingeqi ayizinkulungwane 650, kodwa kukhona namanje inqolobane abantu abayizigidi 4.5. Kafushane, ngokuvumelana namandla isisetshenziswa obuntu bucishe bulingane. Ngaphezu kwalokho, endaweni weRiphabhulikhi Kazakhstan efakwe unaphakade amayunithi US Army. Futhi akumangalisi ukuthi kakhulu isakhiwo zamabutho limise luhluke ukwakhiwa Soviet of the ajwayelekile kithi. Ngakho ukuthi amabutho DPRK kanye ROK kukhona antipodes ezimbili: Northerners eziningi, kodwa akusebenzi isikhali, kuyilapho eningizimu has ezimbalwa "umbuso wentsandvo yelinyenti" imfanelo izikhali kodwa kuningi kangcono.
Ezinye zezinto eziningi kakhulu kukhona impi, ezinhlwini zazo isesikhathini abantu abayizinkulungwane 560. ngezigaba zabo iyinkimbinkimbi, in the "suhoputki" kuhlanganisa armored, amakhemikhali kanye wezikhali zokwakheka, amayunithi ukuvikelwa radiology, ukuzivikela, nezinye izinhlobo amabutho. Ngakho, ukwenza Ukuqhathanisa Armed Forces of the DPRK neNingizimu Korea, kuyoba usizo ukuze ufunde kabanzi mayelana nezisetshenziswa babe South.
Imininingwane Basic ku izingalo
Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha southerners ube amayunithi hhayi ngaphansi kwezinkulungwane ezimbili. Wezikhali imiphongolo - ecishe ibe yizinkulungwane 12. wezikhali Antitank, kuhlanganise anti-tank izinhlelo - futhi angaba yizinkulungwane 12. Kukhona abangaba yinkulungwane anti-aircraft izakhiwo. Libuye omunye main isiteleka acekela mayelana neshumi nanhlanu elihamba lokulwa izimoto zokuguqulwa ahlukahlukene. Ukuze umhlaba amabutho babelwe okungenani 500 ukulwa ukuhlaselwa ngezindiza ezinophephela emhlane.
Sekukonke kukhona ukwahlukana 22. Basuke ihlukaniswe wamabutho ezintathu, ukuphathwa okuyinto ngesikhathi esifanayo umyalo kuzo zonke izikhungo zemfundo, ezilungiselela nezifundiswa abasha, ahlomele impi. Qaphela ukuthi lokhu amabutho ezweni kukhona umnyombo Republic Kazakhstan kanye United States ukuphepha jikelele kohlelo, futhi umyalo zamabutho elihlangene Korean futhi American Kwenziwa ngokusebenzisa umyalo isikhungo ezivamile, lapho abaphathi kuwo womabili amazwe.
Yiqiniso, amabutho kweNyakatho Korea neNingizimu Korea ngokulinganayo ukubaluleka nokuxhumana phakathi ezahlukene amagatsha ezempi ukulwa, kodwa southerners nisondelé kule ndaba ngokuzimisela okukhulu. Cishe njalo ebanjwa imfundiso, okuyinto wasebenza ngokusebenzisa wokubambisana phakathi kwamaqembu kanye amayunithi lamasosha, lapho umsebenzi wenziwa hhayi kuphela US, kodwa futhi Japan nakwamanye sizana of Republic of Kazakhstan esifundeni.
Bet on yesimanjemanje
Southerners zisekelwe ngentuthuko yakamuva emkhakheni wesayensi lempi kanye nobuchwepheshe. Ngokukhethekile ikhokhelwa ngcono kwesimo endaweni lempi kanye nezokuxhumana. Ne Ukugcizelelwa hhayi kuphela ukuthuthukiswa yabo siqu, kodwa futhi ukuze lezo zingxenye eziye othengwe kusukela United States ngesimo imikhiqizo siphelile noma ubuchwepheshe. Lokho amaMelika kwathengwa kokuqala izakhiwo PU M270 futhi M270A1, ngawo kungenzeka ukusebenzisa US ATACMS ukuguqulwa lokuqala ejikijelwayo ATACMS ukuguqulwa 1A. Esimweni sokuqala, uhla umlilo - 190 amakhilomitha, kwesibili - amakhilomitha angu-300.
Uma sikubeka kalula, amabutho DPRK kanye Republic of Korea ngayo kule ndaba yilena okulingana ngokuphelele: bathole inhlokodolobha isitha kusuka insimu yalo, ngaphandle phaphamelani umzamo omkhulu ngokukhethekile. Northerners le njongo kuyadingeka ukuze nesimanje esakhiweni esidala Soviet, kanti uhulumeni we South uthanda umane ukuthenga zonke yazithandela kusukela nabangane babo. Nokho, Isinyathelo, kuyinto impikiswano enkulu.
ROK Army akawuthandi ukudalula ulwazi mayelana izikhali zabo. Esikwaziyo ukuthi southerners okungenani 250 iziqhumane kokubili ukuhlela kabusha. Ngaphezu kwalokho, kukhona ulwazi mayelana nentuthuko eqhubekayo emkhakheni missile yabo.
I zempi ezintsha
Konke amabutho anamandla kunawo wonke esifundeni, okungukuthi, ibutho DPRK neNingizimu Korea inamathela kubaluleke kakhulu ukuhlonywa nokuthuthukisa anamandla zempi. Kodwa uma northerners ongenawo izinsiza ukwakha amathangi yabo zero ke Republic of Kazakhstan amathuba anjalo afumaneka khona. Lena yindlela K1A1 imodeli ( "The Black Panther") yasungulwa. Eyandulela ethangini entsha wakhonza njengephayona ukuguqulwa KI ubudala. Qaphela ukuthi ezisele amayunithi 200 kulezi amathangi okwamanje ithuthukiswa ukuze "Panther" ezingeni. Southerners bayaziqhenya 155-mm howitzers self ezinezinjini K-9 yendlela aklanywe ngayo siqu, isilinganiso ezehlukene umlilo nokunemba kakhulu lomlilo.
Ngaphandle kwalokho, manje umsebenzi uyaqhubeka ukusungula South Korean izimoto zempi "Pihoya" futhi SAM "Chhonma". wadala Ngaphambili baseKorea BMP K200A1 namanje kuqhathaniswa ngenkuthalo zilethwe kwezinhloko zamaviyo. Park of izindiza zempi futhi uyaqhubeka ukubuyekezwa: ngokukhethekile, usanda bati sesimanje egcwele ngoxhaxha ukuhlaselwa ngezindiza ezinophephela emhlane. Ngaphandle kulungiswe ubuholi imishini RK ekhona uhlose ukuthenga phesheya, elisha. Southerners sina futhi ufuna ukubabulala langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi UH-1 "Iroquois" futhi "Hughes" 500MD, kodwa ngoba ngesikhathi esifanayo waqala ukusebenza entsha multi-purpose indiza wezempi nangezinjongo civil.
Emuva ngo-2001, kwakhiwa iRepublic of Kazakhstan ngokuhlanganyela Israyeli idale imodeli UAV "Knight Ingrudsr". Kuyinto idivayisi Amatebhe engasetshenziswa ngenhloso lempi futhi enokuthula, kuhlanganise kwesimo endaweni, ehlasela Okuqondiwe wendawo, ucwaningo Meteorological, nokunye .. Ngonyaka ka-2010, Battalion eziningana UAV kwamiswa, ngamunye ephethe 18-24 Drone namayunithi 64 imishini ezokuthutha nezokuxhumana. Zonke lezi zinyathelo basizwa ukuba kakhulu ukuthuthukisa ukusebenzisana phakathi amagatsha ahlukene wezempi ngezithukuthuku kwesimo endaweni uhlelwe kahle.
Kungani Catalonia uyashiywa Spain?
Kuthathelwe izinyathelo - a nokususwa esikhundleni noma isiphi isikhulu
Nezinqumo uMongameli njengoba idokhumenti yezomthetho ophakeme
Iqembu kwesokudla noma kwesokunxele - ngubani nokuthi bafuna?
Eduard Shevardnadze: Biography, umsebenzi zezombusazwe, izithombe, imbangela yokufa
Ukuhlukaniswa ngohlanga: ukuthi lo mqondo namuhla?
Umphumela ongezelele - i-panacea it?
Pancake nge izinhlanzi obomvu: ngezinsuku zeviki, futhi ngamaholide!
Izinto zami Monster High - nenhle futhi akumangalisi
Kungani namachashaza ikhasi isikhumba?
Slavyanka Pension (Anapa): incazelo amakamelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Abathengisi inhlangano amadolobha German. Trade eNyakatho Yurophu
Lokho ekutadisheni isayensi yokuma kwezinto ezisemkhathini? isayensi yokuma kwezinto ezisemkhathini yesimanje
Umakhalekhukhwini Lenovo A5000: ukubuyekezwa, izincazelo, Ukucaciswa
1947 - unyaka sesilwane ekhalendeni Eastern?
CARS Project: Uhlolojikelele, izidingo zohlelo, kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhansela izwi e "VC" yokuvota. A izindlela ezimbalwa ezilula